Ambongadiny 3-ambaratonga Walk-in trano fandraisam-bahiny mini sary mihetsika PVC trano zaridaina tranona trano fonenana sy tranoona | Winsom
50-99 sekely Sombiny 100-199
1) Vongan-vy mifono vovoka, harafesina ary harafesina.
2) Ny fonony dia mampiasa fitaovana ho an'ny sarimihetsika PVC izay arovan'ny UV ary tsy tantera-drano 100%.
3) Varavarana miendrika zippered mba hidirana mora amin'ny rafitry ny trano fonenana.
Laharana maodely WS-GH23
Anaran-javatra 3-tier Walk-in mini trano fandraisam-bahiny trano fonenana sary mihetsika PVC
Haben'ny vokatra 69x49x193cm (L * W * H)
Fitaovana fonosana 0.08mm sarimihetsika PVC
Frame spec. Tube fantsom-by vita amin'ny vovoka maintso dia 16 * 0.4mm
Fonosana baoritra Fonosana baoritra matanjaka
MOQ 50 farantsa
Ny talantalana trano fonenana dia misy ambaratonga 4, prefek ho an'ny fambolena voankazo, voninkazo, zavamaniry, legioma, masomboly, ahitra ao anaty toerana kely. Ny trano fambolena zaridaina dia afaka miaro ny zavamaniry sy zana-ketsa amin'ny fitaoman'ny toetr'andro sy ny toetrandro. Ankafizo ny voninkazo sy legioma vaovao, salama mandritra ny taona.
Fanorenana mafy orina - Ny rafitry ny trano fonenantsika dia vita amin'ny metaly avo lenta misy vovoka mifono ho mateza maharitra. Ny lanjan'ny lanjan'ny Max isaky ny talantalana dia hatramin'ny 12 lbs.
Ny trano fonenanay mini dia namboarina miaraka amina varavarana mihidy ho an'ny fidirana mora sy rivotra miditra amin'ny rivotra tsara indrindra, izay manampy amin'ny fanitarana ny vanim-potoanan'ny zavamaniry, miaro ny zavamaniry amin'ny hafanana be loatra na ny fihoaram-pefy, ny vovoka ary ny rivotra. Ny sarimihetsika sarimihetsika PVC dia manampy amin'ny fitazonana ny zavamaniryo mandritra ny ririnina ary hanitatra ny vanim-potoanan'ny fitomboany.
Fametrahana mora - Tsy mila fitaovana manokana hanangonana ity trano fonenana madinidinika ity. Tonga miaraka amin'ny kojakoja ilaina sy torolalana ilaina rehetra, araho fotsiny ny torolàlana ary ampifandraiso ireo tsorakazo.
Teo aloha: Fambolena trano fitrandrahana solosaina PE mora vidy
Manaraka: Sarona fiarovana amin'ny vanim-potoana rehetra ho an'ny rivotra iainana any ivelany
Walk-in Tunnel Plastika Fambolena 3x6m